Ho tonga any Hong Kong ve ny rafitra fanaraha-maso ny COVID-19 izay misy kaody miloko napetraka tany Shina · Global Voices teny Malagasy
Mitsongodia ny toerana misy ny olona ilay rafitra napetraka ao amin'ny tanibe Shina
Voadika ny 24 Septambra 2020 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Français, Deutsch, Español, বাংলা, English
Miomana hanao fitiliana ny mponina iray manontolo amin'ny coronavirus vaovao amin'ny faran'ny volana Aogositra ny tanàndehibe rehefa nahatratra ny salan'isa avo indrindra ny trangana COVID-19 tany Hong Kong raha mandrisika ny fampiasana ny valin'ny fitiliana amin'ny rafitra ara-pahasalamana misy kaody miloko telo ny mpanao politika mpanohana an'i Beijing mandritra izany.
Niteraka ahiahy momba ny fiainana manokan'ny olona any Hong Kong ilay tolokevitra – matahotra ny maro fa afaka mampiasa ity rafitra ity ny manampahefana mba hanarahana ny toerana misy ny tsirairay ary hamerana ny fivezivezeny amin'ny antony politika.
Efa nandefa ekipan'ny mpitsabo miisa 60 ny tanibe ho fanampiana amin'ity asa goavana ity, izay mitentina 150 tapitrisa dolara Hong Kong (20 tapitrisa dolara amerikana eo ho eo). Notombanan'ireo manampahefana eo an-toerana fa farafahakeliny olom-pirenena miisa dimy tapitrisa no hilatsaka an-tsitrapo hatao fitiliana izay hanomboka mialoha ny faran'ny volana.
Saingy mandrisika ny olona hanao ankivy ny fitiliana ny ankolafy mpanohana ny demaokrasia any Hong Kong.
Ahiahiana mafy tokoa ny fanaraha-maso miaraka amin'ireo laboratoara miisa telo any amin'ny tanibe Shina izay hanaovana ny valin'ny fitiliana. Nilaza ny mpikatroka sasany fa afaka manararaotra izany hanaovana angondrakitra ADN ho an'ny olom-pirenen'i Hong Kong iray manontolo ny governemanta Shinoa – fepetra mitovy tamin'ilay nampiharin’ Beijing tany Xinjiang.
Nilaza ny governemantan'i Hong Kong fa tsy afaka hiditra amin'ny angondrakitra manokan'ny olona ny laboratoara ary tsy mikasa ny hampiditra ny valin'ny fitiliana ho an'ny rehetra amin'ny rafitry ny kaody ara-pahasalamana amin'ny hoavy ny manampahefana.
Ankoatra ny ahiahy amin'ny fanaraha-maso dia isalasalàn'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana eo an-toerana ny fahombiazan'ny fitiliana ho an'ny rehetra amin'ny fisorohana ny fihanaky ny viriosy. Misy ny fanadihadiana nahitana fa mety hiteraka valim-pitiliana diso ny fitiliana PCR raha toa ka atao fitiliana mialoha loatra ny marary mandritra ny fifindran'ny aretina.
Nanazava tao amin'ny andiam-panehoan-kevitra lava tao amin'ny Twitter ny fomba fiasan'ny rafitra ara-pahasalamana misy kaody ao amin'ny tanibe Shina ny vondrona mpikatroka Hong Kong Global Connect.
Rehefa avy natao fitiliana SARS-CoV-2 ny olom-pirenena rehetra tamin'ny toerana iray manokana, ny rafitra dia nanome azy ireo, tamin'ny alàlan'ny kaody QR notrohina ho ao amin'ny findain'ny olona tsirairay, ny iray amin'ireto loko telo ireto: Maitso, mavo na mena.
Saingy tsy fantatry ny besinimaro mazava ny fitsipika ao ambadiky ny fanolorana loko – nisy ny tatitra momba ireo kaody miloko mena sy mavo izay tsy nohazavaina. Nahita ny famakafakana nataon'ny New York Times fa nozaraina tamin'ny polisy ny lahatahirin'ny fivezivezen'ny tsirairay sy ny toerana misy ny tsirairay avy amin'ny fampiasa finday.
Any Shina, ny AliPay no mitantana ny rafitra ara-pahasalamana misy kaody. Io orinasa io no misahana ny Credit Sesame izay anisan'ny fototra manangana ny rafitra fitokisana ny fiarahamonina any Shina ary manasazy ny olom-pirenena “ratsy fitondran-tena” ary ny manome mari-pankasitrahana ireo izay “tsara fitondran-tena”.